မMatthewဲ 16 (သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835))České uživatelské rozhraní
Porovnání s překladem: American Standard Version Basic English Bible Darby Version Douay-Rheims Kempton Translation King James Version Webster's Bible Weymouth New Testament World English Bible Young's Literal Translation 한국 성경 (Korean) Amharic NT พระคัมภีร์ไทย Afrikaanse Vertaling 1953 Det Norsk Bibelselskap (1930) သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835) Bible kralická Det Danske Bibel Elberfelder Bibel (1871) Elberfelder Bibel (1905) Lutherbibel (1545) Lutherbibel (1912) Eestikeelne piibel Reina Valera (1909) Reina Valera NT (1858) Sagradas Escrituras (1569) Esperanto Biblé Basque (Navarro-Labourdin): New Testament Bible Louis Segond (1910) Bible Martin (1744) Hrvatski prijevod Xhosa Giovanni Diodati Bibbia (1649) Riveduta Bibbia (1927) Vulgata Clementina Latvian New Testament Litova Biblio Károli (Vizsoly) Biblia മലയാളം ബൈബിൾ Dutch Staten Vertaling Almeida Atualizada синодальный перевод (1876) Serbian (Daničić, Karadžić) Pyhä Raamattu (1933/1938) Vuoden 1776 kirkkoraamattu 1917 års bibelöversättning Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Vietnamese Bible (1934) Turkish Bible Arabic: Smith & Van Dyke Hebrew: Modern Greek: Modern Greek New Testament - Nestle 1904 Greek New Testament: Textus Receptus (1550/1894) Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) [Parsed] Greek NT: Textus Receptus (1550/1894) [Parsed] Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants [Parsed] Новий Завіт - переклад Куліша (1871) Armenian (Western): New Testament 新中文版 (简体) 新中文版(繁体) 联盟版(简体) 联盟版(繁体) Japanese Bible 口語訳聖書 Chamorro (Psalms, Gospels, Acts) Coptic: Sahidic NT Kabyle: New Testament Potawatomi: (Matthew, Acts) (Lykins, 1844)
1 ထိုအခါ ဖာရိရှဲဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ကိုယ်တောတော်ကို စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းငှာချဉ်းကပ်၍၊ မိုဃ်းကောင်းကင် ကဖြစ်သော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြပြတောတော်မူမည်အကြောင်း တောတောင်းပန်ကြ၏။
2 ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် ညဦးယံ၌ပြောဆိုတတ်သည်ကား၊ ယခုမိုဃ်းတိမ်နီသည်ဖြစ်၍ မိုဃ်းကြည်လင် လိမ့်မည်ဟု ဆိုတတ်ကြ၏။
3 နံနက်ယံ၌ကား၊ ယခုမိုဃ်းအုံ့လျက်ရှိ၏။ နီမောင်းသောအဆင်းလည်းရှိ၏။ ယနေ့မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း လာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏။ လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ သင်တို့သည် မိုဃ်းကောင်းကင်၏မျက်နှာကို ပိုင်းခြား၍သိ နိုင်ကြ၏။ကပ်ကာလ၏ နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြ။
4 ဆိုးညစ်၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာ၊ ပရောဖက်ယောန၏ နိမိတ်လက္ခဏာမှတပါး အဘယ်လက္ခဏာကိုမျှ သူတို့အားမပြရာဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ ကြွတော်မူ၏။
5 တပည့်တော်တို့သည် ကမ်းတဘက်ဘက်သို့သွားကြသောအခါ မုန့်ကိုယူခြင်းငှာ မေ့လျော့ကြ၏။
6 ယေရှုကလည်း၊ ဖာရိရှဲဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ တဆေးတဆေးကိုသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။
7 တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ ငါတို့၌ မုန့်မပါသောကြောင့် ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။
8 ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင်၊ ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့၊ သင်တို့၌မုန့်မပါသည်ကိုထောက်၍ အဘယ်ကြောင့် အချင်းချင်းဆွေးနွှေးပြောဆိုကြသနည်း။
9 မုန့်ငါးလုံးကို လူငါးထောင်စား၍ စားကြွင်းဘယ်နှစ်တောင်းကောက်သိမ်းသည်ကို၎င်း၊
10 သင်တို့သည် နှလုံးမသွင်း မအောင်းမေ့ဘဲနေကြသေးသလော။
11 ဖာရိရှဲဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ တဆေးတဆေးကိုကြဉ်ရှောင်ကြ ဟူသောစကားစကားကို ငါပြောသည်တွင်၊ မုန့်ကိုအမှတ်ပြု၍ ငါမပြောသည်ကို သင်တို့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သို့နေကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
12 ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် မုန့်၏တဆေးတဆေးကို ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မမူ။ ဖာရိရှဲဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲတို့၏ ဩဝါဒကို ကြဉ်ရှောင်ကြဟု မိန့်တော်မူသည်ကို နားလည်ကြသတည်း။
13 ယေရှုသည် ဖိလိပ္ပုကဲသရိမြို့၏ ကျေးလက်သို့ ကြွတော်မူသောအခါ၊ လူများတို့သည် လူသားဖြစ်သော ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟု တပည့်တော်တို့ကို မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊
14 လူအချို့က၊ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း၊ အချို့က၊ ဧလိယဖြစ်သည် ဟူ ၍၎င်း၊ အချို့က၊ ယေရမိမှစ၍ ပရောဖတ်တပါးပါးဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း ဆိုကြပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊
15 သင်တို့လည်းငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်းဟု မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊
16 ရှိမုန်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်ခရစ်တော်တည်းသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု လျှောက်လေ၏။
17 ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤ အကြောင်းအရာကို သင့်အားဘော်ပြသည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘော် ပြတော်မူသတည်း။
18 ငါဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ပေတရုဖြစ်၏။ ဤကျောက်ပေါ်မှာ ငါ့အသင်းကို ငါတည်ဆောက်မည်။ ထိုအသင်းကို မရဏာနိုင်ငံ၏တံခါးတို့သည် မနိုင်ရာ။
19 ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သော့သော့တို့ကိုလည်း သင့်အားငါပေးမည်။ သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာ ချည် နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြည်လွှတ်သမျှသည် ကောင်း ကင်ဘုံ၌ ဖြည်လွှတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊
20 ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို အဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငှာ တပည့်တော်တို့ကို ပညတ်တော်မူ၏။
21 ထထိုမှတပါး ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်။ လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌ များစွာခံရမည်။ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းခံရမည်။ သုံးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထထမြောက် လိမ့်မည်ဟူသောအကြောင်းများကို ထထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်တို့အား ပြပြတော်မူ၏။
22 ထိုအခါ ပေတရုသည် ကိုယ်တော်ကို မိမိနှင့်အတူခေါ်၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်၌ ဤသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ဤအမှုသည် ကိုယ်တော်၌ မရောက်ရာဟု အပြစ်တင်သောစကားကို လျှောက်သော်၊
23 ကိုယ်တော်သည် မျက်နှာတော်ကိုလှည့်၍ အချင်းရန်သူ၊ ငါ့နောက်သို့ဆုတ်လော့။ သင်သည် ငါတိုက် မိ၍ လဲစရာအကြောင်းဖြစ်၏။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏အရာကို စိတ်မစွဲလမ်းလမ်း၊ လူတို့၏အရာကိုသာ စွဲလမ်းလမ်း သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
24 ထိုအခါ ယေရှုက၊ ငါ၌ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ် တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်။
25 အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ကယ်ဆယ်ခြင်းငှာအလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်အသက်ရှုံး၏၊ ထိုသူသည် အသက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။
26 လူသည် ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်း။
27 လူသားသည် မိမိအဘခမည်းတော်၏ ဘုန်းအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်၊ ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန် အခြံအရံ တို့နှင့် ကြွလာလာတော်မူလတံ့။ ထိုအခါ သူအသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက် အကျိုးအပြစ်ကို ဆပ်ဆပ်ပေး တော်မူလတံ့။
28 ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ လူသားသည် နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာလာတော်မူသည်ကို၊ ဤအရပ်၌ရှိသော သူအချို့တို့သည် မမြင်မြင်မှီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။
Exploring the Meaning of မMatthewဲ 16
Therefore, like the disbelieving religious leaders, we too come to God and say, “Show usasign from heaven,” not realizing that the beating of our hearts, the rising of the sun, and the laughter ofachild are all signs from heaven. Aware that the religious leaders are not really interested inasign, but are only testing Him, Jesus says, “When it is evening you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red’; and in the morning, ‘It will be foul weather today for the sky is red and threatening.’ Hypocrites. You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times” (16:2-3).	1
The situation is not unlike our own. Absorbed in materialistic concerns about our future, we study weather forecasts, political trends, and stock market predictions, unaware of the many miracles taking place in the present moment.	2
Moreover, it is contrary to divine order to persuadeaperson by force. God does not compel our belief. Each of us is kept in freedom so that we may freely choose to accept God — or reject Him — if we so choose.	3 And we accept Him by living according to His teachings, believing that He alone can give us the power to do so. In the process we become increasingly connected to the Lord, to the point where it seems that our will has become one with His will. This is the process of regeneration — the conscious laying down of our old life, so that we can be reborn toanew one. There is no other way, and there is no external “sign” that can prove this inner reality for us. “A wicked and adulterous generation seeks afterasign,” Jesus says. “And no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah” (16:4).
But the more we decide to live according to the Lord’s will we receive wonderful “signs” that progress is taking place. Some of these might includeasoftened heart, increased sensitivity to the needs of others,aforgiving attitude,apatient disposition,agrowing ease at admitting mistakes, andagreater depth of contentment. These, and so much more, are the “signs of the prophet Jonah” (16:4).	4 And, in His mercy, the Lord allows us, toacertain extent, to perceive these wondrous inner changes.	5
In the previous episode, Jesus warned His disciples to “beware the leaven of the Pharisees and Sadducees.” Leavening, as we pointed out earlier, initiatesaprocess of fermentation through which impurities are separated and bread is perfected (13:33). So, even though Jesus has warned His disciples about the leaven represented by the religious leaders, we still need to deal with “leaven” in our lives — the continual temptation to succumb to the beliefs and attitudes represented by the religious leaders. If dealt with properly, however,aprocess similar to the leavening of bread and the fermenting of wine can take place within us; we can make progress in our spiritual journey.	6
The leavening process, therefore, corresponds to what happens within us during times of spiritual temptation in our lives. Since there is no regeneration without temptation, this is vital stage in our spiritual development.	7 However, in order to triumph in the combats of temptation, we need to know that they are coming, that they cannot be avoided, and that there are spiritual truths for dealing with them. of all the truths that are available for successfully moving through these times of spiritual trial, one truth, above all, is necessary. It is the foundation of all other truths.
While this passage has been traditionally understood to mean that Peter will literally be able to open and close the gates of heaven, the meaning is much higher. It’s not about Peter standing at the “pearly gates” deciding whether or not to admit us to heaven. Rather, it’s about the spiritual truths that are given to us in the Word of the Lord. Whenever these truths are taken into the mind, loved, and lived, they become “keys” that close the door to hell — allowing nothing evil or false to enter our mind, and open the door to heaven, allowing all that is good and true to flow in. Whatever is damaging to our spirit will be “bound”; and whatever is life-promoting for our spirit will be “loosed.” And the “key of keys,” the rock of truth upon which all other truth stand, is the confession that Jesus is “the Son of the living God.”	8
The establishment of that kingdom begins withadecision to make use of our God-given ability to raise our minds above the merely natural degree of our life so that we might understand the laws of spiritual reality. This ability, which is implanted in everyone from creation, enables us to open our spiritual eyes so that we may see and understand divine truth (the “Son of Man”) in our lifetime. Whenever we make use of this ability, raising our understanding above material concerns, we come intoanew understanding. We see all things in the bright light of higher truth. It is this more interior sight that Jesus is speaking about when He says, “There are some standing here who shall not taste of death until they see the Son of Man coming in His kingdom” (16:28).	9
1. In the words of an English nursery rhyme: “Red sky at night, sailor’s delight; red sky at morning, sailors take warning.”
2. Arcana Coelestia 2493: “2493. I have spoken to angels about the memory of things of the past and about consequent anxiety concerning things of the future, and I have been informed that the more interior and perfect angels are the less do they care about things of the past or think about those of the future, and that this is also the origin of their happiness. They have said that the Lord provides them every moment with what to think, accompanied by blessing and happiness, and that this being so they have no cares and no worries. This also is what is meant in the internal sense by the manna being received ‘day by day’ from heaven, and by the ‘daily bread’ in the Lord’s Prayer.”
Arcana Coelestia 2349, 2759, 2760, 2788, 2798, 2816, 3750, ...3934, 4368, 4735, 5922, 6073, 6344, 7021, 7166, 7906, 8159, 8256, 8304, 8328, 8409, 8581, 8939, 9282, 9293, 9410, 9807, 10053, 10067, 10089, 10283, 10331, 10483
Apocalypse Revealed 62, 134, 174, 273, 556, 598, 639, ...641, 642, 643, 664, 748, 768, 798, 839, 915
Doctrine of the Lord 25, 42
Doctrine of Life 2, 79, 99, 105
The Last Judgement 57
True Christian Religion 113, 224, 314, 342, 376, 379, 440, ...483, 643
Apocalypse Explained 9, 63, 86, 98, 122, 200, 206, ...209, 250, 254, 328, 329, 333, 376, 411, 443, 532, 536, 538, 706, 740, 750, 785, 820, 864, 875, 893, 1082
Mít víru v Pána
ဆာလံ 49:8, 9
ဒံယေလ 7:13, 14